थप २३२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, २७२ जना डिस्चार्ज « Etajakhabar
प्रकाशित मिति : २० असार २०७७, शनिबार १६:३९
काठमाण्डौं । कोरोनाभाइरसका दुई सय ३२ जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबिस घण्टामा देशभरि कोरोनाभाइरसका २३२ जना नयाँ बिरामी थपिएका छन् । यससँगै देशभरि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको संख्या १५ हजार ४९१ जना पुगेको छ ।
शुक्रबारसम्म सङक्रमितको संख्या १५ हजार २५९ रहेको थियो । हालसम्म कोरोनाभाइरसका सङ्क्रमित छ हजार ४१५ जना मुक्त भई घर फर्केका छन् । कोरोनाभाइरसका नौ हजार ४२ जना सङ्क्रमित हाल आइसलोशनमा छन् ।
अहिले सबै ७७ वटा जिल्लामा कोभिड-१९ पुगिसकेको छ। गएको २४ घण्टामा ४,०५० जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको र कुल परीक्षण सङ्ख्या दुई लाख ४६ हजार दुई सय ९७ पुगेको डा. गौतमले जानकारी दिए।
आइसोलेशनमा भएका सङ्क्रमितको सङ्ख्या ९,०४२ छ। विभिन्न जिल्लामा ३३,१२५ व्यक्ति क्वारन्टीनमा छन्। तीमध्ये अधिकांश भारतबाट फर्किएका हुन्। क्वारन्टीनमा भएका मानिसको परीक्षणमा तीव्रता दिइएकाले सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
अहिले महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण मानिसले स्वस्थ रहन आफ्नो सरसफाइमा पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा विज्ञहरूले औँल्याएका छन्। त्यसका लागि हात बेलाबेलामा धुनुपर्छ। त्यसबाहेक मानिसले प्राय: जहाँ जाँदा पनि आफूसँगै लैजाने गरेको स्मार्टफोनलाई पनि सफा राख्नुपर्छ।
हातेफोनलाई कुनै क्षति नपुर्‍याईकन कसरी सफा गर्न सकिन्छ त? सूक्ष्मजीव वैज्ञानिकहरूले सामान्य साबुन र पानी प्रयोग गरेर फोन सफा गर्दा त्यसबाट कीटाणुको परिमाण घटाउन सकिने बताएका छन्। हेर्नुहोस् फोन सफा गर्ने उपाय, यो भिडिओमा।